Meydka Askarigii Kumandoska Faransiiska oo la soo bandhigay – idalenews.com
Xarakada Al-Shabaab ayaa soo bandhigay Meydka Askarigii Faransiiska ee ka mid ahaa Ciidamadii Kumandoska ee habeenkii jimcihii weeraray deegaanka Buulo Mareer, kadib markii ay sheegeen inuu geeriyooday.
Afhayeenka howl galada Shabaab C/casiis Abuu Muscab ayaa sheegay in askariga dhaawac soo gaaray kadib uu u geeriyooday, iyadoo bayaan ka soo baxay Al-Shabaab oo lagu baahiyay barta Twitter-ka lagu sheegay in qalab milateri ay ka qabsadeen Ciidamadii Kumandoska.
Abuu Muscab ayaa sheegay inuu wali nool yahay la heystihii u dhashay Faransiiska ee gacantooda ku jira Denis Allex, inkastoo aanay soo bandhigin.
Goor sii horeysay Faransiiska ayaa sheegay inay la’yihiin mid ka mid ah askartooda, halka uu askari uga dhintay weerarkaas, waxaana Wasiirka gaashaandhiga Faransiiska sheegay in la dilay Denis Allex.
Meydka Askarigan oo ay ka muuqatay dhaawicii soo gaaray ayaa lagu soo bandhigay meel geed hoostiisa oo lagu tilmaamo karo beero, iyadoo ay dhinac yaaleen qalab kale oo ahaa agabkii milateri ee uu xirnaa, waxaana ka mid ahaa labo koofiyadood, qoryo noocyadooda casri yihiin iyo agab kale sida lagu sheegay bayaanka.
AMISOM oo tababar u furtay shaqaale loogu talagalay Dab damiska